မြရွက်ဝေ: ပိန် ပိန် ပိန်
Posted by မြရွက်ဝေ at 6:07 PM
ကို... မပိန်ပါဘူး ညီမလေးရဲ့.
အစ်မက ၀နေတာ.း)
Nippori မသွားဖြစ်တော့တာသိလား. အစ်မသွားဖြစ်မှ
ဖုန်းဆက်တော့မယ်နော်. အထည်တွေ ပြန်ခါနီးမှပဲ ၀ယ်
ဖြစ်တော့မယ်။ အခု မ၀ယ်ဖြစ်တော့ဘူး ညီမရေ.
အစ်မလည်း ကွန်ပြူတာရှေ့အထိုင်များလို့ ဗိုက်ခေါက်
အစ်မကတော့ အိမ်မှာပဲ တခါတလေ ကိုယ်လက်လှုတ်
ရှားဖြစ်တယ်။ တစ်ပတ် ၁ရက်လေ. ဟဟး))
၀ = လှ လို့လည်း ဆိုကြပါရဲ့....
ပိန်ချင်တယ် ပိန်ချင်တယ်.. ရောမွှေလို့ ရရင်ကောင်းမှာ
ဟယ်..သူများကို နောက်နေတာလား.. (အားငယ်စွာမေးသွားသည်)
မမလုကတော့ ချက်လိုက် စားလိုက်နဲ့ ၀လုံးနေတာပဲ။
ဂျပန်မှာ တွေ့တုန်းကထက် အနည်းငယ် ပိုဝလာလို့ ချစ်သော မမ၀ါဆီက ခါးချိုးနည်းလေ့ကျင့်ခန်း တောင်းပြီး လုပ်နေရပါတယ်။
သူများတွေက ပိန်လို့ ၀အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။
လုလုတို့ကတော့ ၀လို့ ခါးပျောက်သွားမှာစိုးလို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရတယ်။
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး လှပနေဖို့ပဲ မဟုတ်လားနော်။ ကြိုးစားထား နှမတော်ရေ့့့ 
မနက်စာအဖြစ် ၁၁၅ဂရမ် ဒိန်ချဉ် နေ့တိုင်းစားဖြစ်တယ်
ဘာမှမရှိတဲ့ နေ့တွေဆိုရင် ဒိန်ချဉ်လေးပဲ စားထားလိုက်တာပဲ
ပိန်တာ ၀တာ မျိုးရိုးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ ပြောကြတာပဲ။ ပိန်နိုင်တုန်း ပိန်ထားပါ ညီမရေ... ၀တဲ့သူတွေ ပိန်ချင်ရင် အရမ်းခက်တယ် (ကိုယ်တွေ့ပါ)
အရပ်ချင်းတော့ တူတယ်။ ပိုလှ တစ်လက်မပေါ့။ ဟိဟိ
အလေးချိန်ချင်းတော့ တူဘူးကွယ်။ :(
မနက်ဆို သိပ်မစားနိုင်တာချင်းတူတယ်။ ဘယ်လောက်စားစား အိပ်အိပ် မ၀တာချင်းတူတယ်။ ဗိုက်ပူကြီး ဖြစ်လာမှာ ကြောက်တာချင်းတူတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား မရှိတာ အားနေ ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေတာ ချင်းတူတယ်။
မတူတာကတော့ ကျွန်မက မချက်တတ် မပြုတ်တတ်တာပါပဲ။ :)
ခွန်နဲ့အတူတူပဲ။ခွန်လည်းအလယ်တန်းလောက်ကတည်းကအရပ်ပဲထွက်လာတယ် လုံးဝ ၀ မလာဘူး။
ဘဝတူတွေ ရှိတယ်၊ ဘာမှ အားမငယ်နဲ့၊ တို့လည်း ဝချင်လို့ မြရွက်ဝေ စားတဲ့အတိုင်း လိုက်စားကြည့်မယ်။ ပေါင်ချိန်လိုက်ရင် ဘယ်တော့မှ ကီလို ၄၀ မကျော်လို့ စိတ်ညစ်နေတာ။ စားမယ်၊ စားမယ်။ ကစားဖို့တော့ နည်းနည်းကြိုးစားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။